Axlin's bestiary: imwe inonakidza nyaya naLaura Gallego | Current Literature
John Ortiz | 01/11/2021 18:20 | Yakagadziridzwa ku 01/11/2021 20:24 | Fantasy, Vechidiki Mabhuku, Novela
Bhiiini raAxlin ibasa remabhuku anoshamisa nemunyori akatanhamara weValencian Laura Gallego. Yakaburitswa muna Kubvumbi 2018 uye yakaiswa munzvimbo yakaparadzwa nemamonsters ane hutsinye. Ndiyo yekutanga novel ye trilogy GMaUardians eCitadel; vanobatanidza: Chakavanzika chaXein (2018) uye basa raRox (2019).
Nekuda kwekuedza kwake, Laura Gallego akave mucherechedzo mumhando yekufungidzira, ichiita manzwiro akadzama kune vateereri vechidiki. The saga Ndangariro dzaIdhun ndechimwe chezvinyorwa zvake zvinosvika kure, izvo zvinopfuura makopi miriyoni akatengeswa. EAxlin's bestiary raimiririra kudzoka kwekukunda kwevaValencian; rondedzero yakagamuchirwa zvakanyanya zvekuti yakapihwa muna 2019 nemagazini Temberi yemagonhi churu seBest National Novel yeSaga.
1 Pfupiso yeAxlin's Bestiary
1.1 Nyika yakasiyana
1.2 Mukadzi wechidiki akakosha
1.3 Rudzi rutsva
1.4 Bhuku pamusoro pezvikara
1.5 Dangerous adventure
1.6 Guta rakasiyana nemamwe
4 Nezve munyori, Laura Gallego
4.1 Kuberekwa uye kutanga kusvika kune tsamba
4.2 Zvidzidzo zveYunivhesiti uye kutanga kubudiswa
4.3 Basa rakawanda
4.4 Basa rine mukwidza usingamisiki
4.5 Mimwe mibairo yakakosha yaakawana
4.6 Inoshanda naLaura Galler
4.7.1 Mabhuku ega ega
Pfupiso ye Bhiiini raAxlin
Vagari venharaunda yakakura vanorwiswa zuva nezuva nezvikara zvinotyisa. Zvisikwa izvi zvakatsaurirwa kuuraya uye kudya vanhu pasina tsitsi, kudyara kutya kwese kwazvinopfuura. Vanhu—vakazvipira kumamiriro ezvinhu akavakanganisa—vanogara vari voga, vaine muitiro wakapfava unonangidzirwa pakurarama kwenguva refu sezvinobvira.
Mukadzi wechidiki akakosha
Axlin Ndicho kunyanya musikana muduku anogara munharaunda duku kurohwa nemhando ina dzezvikara. Paakanga achiri mwana, akarohwa nemuenzaniso unozivikanwa se "knotty." Pasinei nokupona pakurwiswa, gumbo rako akanga akuvara naizvozvo akanga akaremara. Hurema hwake hahumubvumidzi kuti afambe nekukasira kana kumhanya kana atarisana nekurwiswa.
Nokuti haagoni kuzvidzivirira pachake, Axlin anotsvaga dzimwe nzira dzekubatsira vamwe vake. Zvakafanana nerimwe zuva munyori wemusha anoti anoda kumudzidzisa kuverenga nokunyora, ichatsiviwa mune ramangwana. Kunyange zvazvo uhwu huri hunyanzvi hwakakosha, hapana aifarira kuhudzidza, vakahutarisira pasi; Zvakadaro, mukadzi wechidiki akabvuma. Makore gare gare, murume uyu paakafa, Axlin akave munyori mutsva weiyo enclave.
Bhuku pamusoro pezvikara
Zvishoma nezvishoma kugona kwake kwakakura, sezvakaitawo kuda kuziva zvakawanda pamusoro pezvikara. Pese apo boka raidzoka kubva kunzvenndo, aivabvunza nezvezvakaitika kwavari uye maitiro ezvisikwa zvisina tsitsi. Ruzivo rwese rwakanyorwa mubhuku, kuitira kuti paitwe gwara kuitira kuti zvizvarwa zvinotevera zvizvidzivirire pazviri.
Kufarira kwake kunotowedzera paanoona kuti kune mamwe marudzi ezvikara, saka anoita chisarudzo chinokosha. Axlin anofunga kutora rwendo rurefu kuti aongorore uye atore data kubva kune yake ruzivo. Aya ndiwo matangiro anoita musikana mudiki mutambo waanozowana ane njodzi zvakanyanya. Izvi zvinoita kuti zvinyorwa zvako zvinyanye kukosha, zvichiva mhuka yakakwana.
Guta rakasiyana nemamwe
Munzira, Axlin tichasangana mavara matsva anozove nesarudzo muhupenyu hwake, senge Xein. Saizvozvo, achaziva kuti kune guta risina zvikara inonzi Citadel, saka inotarisa pakusvika ikoko. Kuita mishoni nyowani iyi kunomufadza zvakanyanya, uye nekuzvifunga achaziva kuti ndiani ari kudivi rake. Nekudaro, iwe paunosvika pa "saiti yakaburitswa" iwe unozoona kuti handizvo zvawaitarisira.
Axlin's bestiary ndeye una fantasy novel yemhando yevacheche / yevadiki ine zvitsauko makumi matatu nemanomwe izvo zvinopeturika mumapeji anopfuura 500 zvishoma. Yakaiswa munyika yakarohwa nemamonsters uye yakakamurwa kuita enclaves. Nhoroondo Inorondedzerwa mumunhu wechitatu nemavara akasiyana-siyana; ine runyoro rwenyaya kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Ndiye protagonist wenovel. Nyaya inotanga achiri musikana uye mukukura kwake muchirongwa chose unoona kuti anokura sei nemuyedzo wega wega waanopasa. Sarudzo dzake dzakachenjera dzinomuita kuti ave munhu akashinga mukadzi wechidiki anopedzisira ave munyori wemusha wake, semugumisiro waanosarudza kuita basa rakaoma uye rinokosha mukufarira vamwe vagari: kujekesa mhuka.
Ndiye mumwe protagonist wenyaya uyo munyori anotsaurira zvitsauko zvakati wandei. Iye murume wechidiki anogara naamai vake mune imwe enclaves, vese vari vega kusvika Axlin asvika. Upenyu hwake hunotora shanduko huru kubva pakuva mukomana akasurukirwa kuti ave chido cheboka rainzi "The Guardians."
Nezve munyori, Laura Gallego
Kuberekwa uye kutanga kusvika kune tsamba
Laura Gallego García akaberekwa musi weChipiri, Gumiguru 11, 1977 munharaunda yeValencian yeQuart de Poblet muSpain. Kubva achiri mudiki anga achifarira zvemabhuku, uchapupu hweizvi ndohwekuti Pazera remakore 11, pamwe chete neshamwari, akatanga kunyora bhuku rekufungidzira. Zvakatora makore matatu kubatanidza uye yakaguma yava inoda kusvika 300-peji nyaya inonzi Zodiac, nyika yakasiyana, asi havana kuzviparidza.
Zvidzidzo zveYunivhesiti uye kutanga kubudiswa
Mushure mekupedza zvidzidzo zvesekondari, akanyoresa kuYunivhesiti yeValencia, mubasa reHispanic Philology. Panguva iyoyo, Laura akanga atonyora mabhuku gumi nematatu, ose akanga atumirwa kuvatsikisi nemakwikwi, asi akanga asina kukwanisa kutsikisa. Kusvika nhamba 14 yasvika, Kuguma Kwenyika (1999), basa iro munyori akahwina mubairo weBarco de Vapor kubva kuEditorial SM.
Gallego akaramba achinyora asingamire, basa rake raitevera raive retetralogy Makoronike eShongwe (2000). Akabudisawo mabasa ega ega, akadai Dzokera kuWhite Island (2001) uye The Daughters of Tara (2002). Muna 2003 akapihwa zvakare mubairo wepagore kubva kuEditorial SM, aine La ngano yamambo akadzungaira. Kubudirira uku kwakateverwa nemamwe mabasa akadai se: Muunganidzi wemawadhi anoshamisa (2004).
Basa rine mukwidza usingamisiki
Kubva ipapo, Basa rekunyora rave kukwira, nekuratidzwa kwemabhuku akati wandei akazvimirira nemasaga mashanu. Pakati pekupedzisira tinogona kutaura trilogies Ndangariro dzaIdhun (2004) uye Citadel Guardians (2018). Saizvozvovo, Gallego akapinda mumhando yezvinyorwa zvechokwadi nenhevedzano Sara y vahwinha, iyo ine mabhuku matanhatu.
Iri ibasa rake rakakura rekunyora, muValencian akaburitsa zvinyorwa zvinopfuura makumi mana - zvekufungidzira, zvakanyanya - uye akashandurirwa mumitauro yakati wandei.
Mimwe mibairo yakakosha yaakawana
Cervantes Chico yeVechidiki Literature (2011)
Mabhuku eNyika eVana uye Vechidiki muna 2012 na Iko kuimba miti (2011)
Imaginamalaga 2013 by Bhuku reZvikwangwani (2013).
Inoshanda naLaura Galler
Zvakataurwa naLaura Gallegog
Mabhuku ega ega
Kuguma Kwenyika (1999)
Dzokera kuWhite Island (2001)
Vanasikana vaTara (2002)
Arba aripi? (2003)
Ngano yaMambo Mudzungairi (2003)
Mweya wekutambudzika (2004)
Max haachakusekese (2004)
Mwanasikana wehusiku (2004)
Muunganidzi wemawadhi anoshamisa (2004)
Alba ane shamwari chaiyo (2005)
Empress ye ethereal (2007)
Makenduru maviri edhiabhori (2008)
Iko kuimba miti (2011)
Bhuku remasuo (2013)
Nyasha dzese dzehumambo (2015)
Zvese zvaunogona kurota nezvazvo (2018)
Kutenderera kwamambo asingagumi (2021)
Kutuka kwaTenzi (2001)
Kudana kwevakafa (2002)
Sara uye The Goleadoras:
VaGoleadoras havaregi (2010)
N'anga nemukana (2012)
Magamba nemukana (2016)
Bhiiini raAxlin (2018)
Chakavanzika chaXein (2018)
Basa raRox (2019).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Bhiiini raAxlin